Doorashadu waxay qaadan doontaa laba sano – Yuusuf Garaad | KEYDMEDIA ENGLISH
Doorashadu waxay qaadan doontaa laba sano – Yuusuf Garaad
Ula kac miyaa ummadda loo khiyaamayaa? Mise waa mas’uuliyad darro iyo farsamo xumo dhanka madaxda ay gacanta ugu jirto doorashadu? Yuusuf Garaad
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar, ayaa carabaabay in haddii doorashooyinku ku socdaan gaabiska iyo caga-jiidka ay ku billowdeen aan la af-meeri doonin ka hor bartamaha sanadka 2023.
“Marka laga soo tago cilladaheeda kale ee tirada badan, doorashada dalka ka socotaa waxay qaadan doontaa laba sano. Haa waa laba sano, waa haddii aan gaabiska ay hadda ku socoto wax laga beddelin”. Ayuu yiri Yuusuf oo daabacay qoraal uu uga hadlayay dib u dhaca doorashoyinka.
Doorashooyinka dadban, waxaa la daah-furay 29 July 2021, markaas oo sanatarkii ugu horreeyay lagu doortay magaalada Kismaayo, xilligaas waxaa laga joogaa 101 maalmood, waxaan wali la soo gabagabeyn doorashada Aqalka sare, halka Golaha shacabka la doortay kaliya labo kursi oo mid muran ku jiro.
“Haddii sidaa gaabiska ah ay ku socoto, in la dhammaystiro doorashada xubnaha labada Aqal waxay qaadaneysaa 514 maalmood oo hadda naga dhimman. Waa sannad iyo toddoba bilood oo ku eg bisha May ee 2023”. Ayuu sidoo kale yiri Yuusuf.
Wuxuu xusay in 101 maalmood ee hadda doorashadu socotay, iyo 514 maalmood oo haddii aan xawaaraha wax laga beddelin ay qaadan doonto in la doorto 275-ta Mudane ee Doorashadoodu ay harsan tahay, isu geyn waxay doorashadu soconeysaa 615 maalmood, taas oo ka dhigan 20 bilood.
“Haddii lagu daro laba bilood oo lagu dooran doono Guddoonka labada Aqal iyo Madaxweyne, waxay doorashu soconeysaa 22 bilood oo u dhiganta laba sano oo laba bilood dhimman”. Ayuu ku sii daray.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa dib uga dhacay xilligii loo qorsheeyay, waxaana hadda la sii saadaalinayaa dib u dhac hor leh, halka Beesha Caalamka ay dhawaan ku baaqeen in ka hor curashada sanadka soo socda la soo af-meero doorashooyinka.